Thailand waxay soo tebisay 11,397 xaaladood oo cusub oo ah COVID -19 iyo 101 dhimasho -
Thailand waxay soo tabisay 11,397 kiis oo cusub oo COVID-19 ah iyo 101 dhimasho ah
Taariikh: Sun 8 Dhul Hijjah 1442AH 18-7-2021AD By Irwan Shah Categories: Bangkok Cha-Am Chiang Mai Chiang Rai Chumphon Koofi yai Hua Hin Kanchanaburi Khao lak Khao Yai Khon Kaen Koh Beddel Koh Lanta Koh Phangan Koh Samed Krabi Lampang Loei Mae Hong Wiilka Nakhon Pathom Nan Pathum Thani Pattaya Petchabun Phang nga Jasiiradda Phi Phi Phitsanulok Phuket Rayong Samui Sukhothai Tak Thailand Trat Uthai Thani No comments
Maalin kadib markii la dejiyay diiwaanno cusub oo faafa oo ka badan 10,000 oo kiis oo COVID maalin walba ah iyo in ka badan 100 dhimasho, Thailand Axadii ayaa soo werisay xitaa kiis maalinle ah oo ka sii sarreeya oo ah 11,397 oo ay weheliso 101 dhimasho oo cusub. Axaddii sidaas ayaa lagu calaamadeeyay maalintii saddexaad ee isku xigta ee wadarta guud ee kiisaska COVID maalin kasta.
Wadaagga 19-aad Thailand
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Sebtember 20, 2021 13:00 +07
Afartii maalmood ee la soo dhaafay, kiiska COVID -ga cusub ee maalinlaha ah ayaa guud ahaan soo galay Thailand waxay ka baxeen 9,186 ilaa 9,692 ilaa 10,082 shalay iyo ugu dambeyn 11,397 maanta. Cusboonaysiinta Axadda ayaa la keenay ThailandTirada kiisaska COVID ee isugeynta ah tan iyo bilowgii masiibada ilaa 403,386, oo dhaaftay sumaddii 400,000 markii ugu horreysay.
Cusboonaysiinta Axadda ayaa sidoo kale timid iyada oo ay dawladdu soo rogtay xayiraadyo adag oo COVID ah gudaha Bangkok iyo gobollo kale oo dhib badan ka dhacay. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in tillaabooyinka jira ay bilaabeen Isniintii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan bandow habeenkii ah iyo xannibaadda socdaalka gobollada, aysan saameyn ku filan lahayn sidoo kale badanaana aysan helin u hoggaansanaanta dadweynaha ee ku filan.
101 dhimasho oo cusub oo COVID ah ayaa la soo sheegay Axaddii taasoo muujineysa hoos u dhac ku yimid diiwaanka 141 ee la soo sheegay Sabtidii, laakiin weli waa ThailandTirada labaad ee ugu sareysa ee maalin kasta u dhimata masiibada. Wadarta guud ee dhimashada COVID ee dalka ayaa hadda gaartay 3,341, iyadoo isbitaallada COVID ay sidoo kale dejinayaan heerar cusub maalin kasta.
Kiisaska cusub ee COVID ee la soo sheegay Axaddii waxaa ka mid ahaa 11,079 oo ka mid ah dadweynaha guud, sidoo kale rikoor maalinle ah oo cusub, iyo 318 xaaladood oo ka yimid xabsiyada qaranka. Guud ahaan, ThailandHeerka hadda ee kiisaska COVID maalinlaha ah ayaa ku dhowaad labanlaabmay 6,000 tirada kiisaska maalinlaha ah ee laba toddobaad ka hor.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in kiisaska COVID ee sii kordhaya iyo tirada dhimashada ay ku jiraan Thailand waxaa kiciyay Delta aad u faafa (Hindiya) kala duwan oo ah cudurka coronavirus oo ku sii fidaya dalka. Faafida ayaa horseeday faqriga oo kordhay, shaqo la’aanta oo sii kordheysa iyo mudaaharaadyo ka dhan ah dowladda.
Dhawaan, warbixinnada wararka ayaa bilaabay inay muujiyaan kiisaska COVID oo ku xareysan bannaanka isbitaallada oo aan awoodin inay helaan sariiro, safaf dhaadheer oo dadka baaritaannada ka raadinaya xarumaha baaritaanka COVID laakiin aakhirkii loo weeciyay awood -darro, iyo koox gargaar oo ugu baaqaysa dadka deegaanka inay calankooda suraan bannaanka guryaha haddii ay u baahan yihiin cunto ama gargaar caafimaad.
Faafitaanka COVID oo markii hore xuddun u ahaa Bangkok iyo dhowr gobol oo ku xeeran ayaa dhowaan ku faafay waddanka oo dhan, oo dhan 77 ka mid ah ThailandGobollada badiyaa waxay soo sheegaan kiisas cusub maalin kasta.
Sabtidii, kooxihii kiiska cusub ayaa laga soo sheegay warshaddii cuntada badda ee la qaboojiyay ee Samut Sakhon, warshadda birta ee Chonburi, warshadda alaabta guriga iyo xarunta shaqaalaha ee Nonthaburi, warshadda fooxa ee Nakhon Pathom, warshadda shaashadda telefishanka ee Prachinburi, suuqa Chao Prom iyo warshadda lathe ee Ayutthaya, warshadda sibidhka ee Saraburi iyo weelka miraha ee Kanchanaburi.
Thailand Sabtidii ayaa mar kale soo warisay heerar cusub oo heer sare ah oo ah kiisaska COVID ee firfircoon ee isbitaal la dhigay (110,565) iyo saamiga kuwa xaaladdoodu culus tahay (3,454). Saamiga bukaannada halista ah ee hawo -mareenada ayaa hoos uga dhacay 847 illaa 839 Sabtidii, laakiin taasi waxay u badan tahay inay sabab u tahay tirada ugu badan ee Sabtida oo ah 141 dhimasho oo cusub.
Isbitaallada guud ee COVID ayaa ku dhowaad labanlaabmay labadii toddobaad ee la soo dhaafay, iyo saamiga kuwa xaaladdoodu culus tahay ayaa labanlaabmay saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay. Sabtidii, ThailandTirada guud ee bukaannada COVID, oo kordhay 87 maalintii, ayaa kor u kacay 28 maalmood oo xiriir ah.
Jimcihii, Isbitaalka Ramathibodi, oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn uguna waaweyn dowladda Bangkok, ayaa ku dhawaaqay joojinta dhammaan ballamaha qalliinka xulashada iyo qaar ka mid ah adeegyada waaxda ilaa ogeysiis dambe, iyadoo la sheegay in kiisaska COVID ay cusbitaalka u gudbiyeen qarka.
Isbitaalku wuxuu soo qaatay tiro sii kordheysa oo ah infekshannada COVID ee shaqaalaha caafimaadka oo hadda gaaray 300, dalabaadka daryeelka ku dhawaad ​​1,000 bukaan oo COVID ah oo isbitaal la dhigay, 350 kale oo karantiil guriga ah iyo 200 bukaan oo kale oo COVID ah oo sugaya in la seexiyo daaweyn.
Thailand waxay soo tabisaa warbixin maalinle ah oo ku saabsan cudurada loo yaqaan 'Covid-19' iyo 141 dhimasho ah
Thailand ayaa soo warisay 11,305 xaaladood oo cusub oo Corona ah iyo 80 dhimasho oo dheeri ah
Thailand waxay mar kale soo sheegtaa rikoor cusub oo maalinle ah oo ah 13,655 COVID-19 xaaladood iyo 87 dhimasho ah
Thailand waxay soo tebisay rikoor kale oo sarreeya oo ah 14,575 xaaladood oo ah Covid-19 iyo 114 dhimasho
Thailand ayaa soo warisay 14,260 xaaladood oo cusub oo Coronavirus ah iyo 119 dhimasho oo dheeri ah
Thailand ayaa soo tebisay rikoor cusub oo maalinle ah oo ah 13,002 Covid-19 xaaladood iyo 108 Dhimasho
Afarta xilli ee Hoteel Bangkok ma Xalaal baa mise waa Muslim Saaxiib?
Meesha Dalxiiska ee Taraburi & Spa Chiang Mai waa Xalaal ama Huteel Saaxiibtinimo oo Muslim ah oo ku yaal Chiang Mai
Guryaha Siri Sathorn ee Adeegga ah Bangkok Xalaal Ma Sharcibaa Mise Muslim Saaxiibbaa?
Ma Pung-Waan Resort & Spa Kwai Yai Kanchanaburi ayaa ah Xalaal ama Huteel Saaxiibtinimo oo Muslim ku yaal Kanchanaburi
eHalal Safarka Mart > News Latest > Thailand > Bangkok > Thailand waxay soo tabisay 11,397 kiis oo cusub oo COVID-19 ah iyo 101 dhimasho ah